Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePeru » 7.5 Inyikima kuMntla wePeru
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zasePeru • Iindaba zeWired Travel
Iinyikima ezimbini zahlasela iPeru ngale Cawa, kodwa ngethamsanqa azibanga nzakeleyo okanye zingxwelerha.
Umonakalo orekhodiweyo kwindawo esemagqagaleni yeAmazon ubukhulu becala bubume.
Umongameli wasePeru uthe urhulumente wakhe uza kubaxhasa abo bachatshazelwe yinyikima ye-7.5-magnitude yanamhlanje ekuseni ngeCawe, ishiya ukonakala kwesakhiwo kwindawo esemantla yelizwe.
Kwakhona, inyikima ye-5.2 yarekhodwa eLima, isixeko esilikomkhulu lasePeru.
Akukho sisongelo setsunami kuLwandlekazi lwePasifiki.
Ayibonakali inyikima kwindawo esemantla ePeru. Akukho konzakala kuye kwabikwa, kodwa izakhiwo kunye neendlela ziye zonakaliswa, njengoko kubonwe kwiividiyo ezilayishwe yiPeru National Police Force.
Le nyikima yavakala e-Ecuador naseLima.
Inyikima ye-28 kaNovemba ka-2021, iM 7.5 kumantla ePeru yenzeke ngenxa yempazamo eqhelekileyo kubunzulu obuphakathi, malunga neekhilomitha ezili-110 ngaphantsi komphezulu woMhlaba ngaphakathi kwe-lithosphere ethotyiweyo yepleyiti yeNazca. Izisombululo zendlela egqalileyo zibonisa ukuba ugqabhuko lwenzekile mhlawumbi kumntla-ntshona-ntshona okanye kumzantsi-mpuma wokubetha, ukudipha okuphakathi kwimpazamo eqhelekileyo.
Kwindawo yenyikima, ipleyiti yeNazca ihambela empuma ngokubhekiselele kwiplate yaseMzantsi Melika ngesantya esimalunga ne-70 mm / yr, ithoba kwi-Peru-Chile Trench, ngasentshonalanga yonxweme lwasePeruvia, kunye ne-28 kaNovemba. inyikima. Iinyikima zomhlaba ezikumantla ePeru kunye noninzi lwentshona yoMzantsi Melika ngenxa yobunzima obuveliswa yile subduction eqhubekayo; kolu latitude, ipleyiti yeNazca iyasebenza ngokunzulu ukuya kubunzulu obumalunga nama-650 km. Le nyikima yenzeke kwinxalenye yepleyiti ethotyiweyo evelise iinyikima rhoqo ezinobunzulu obuphakathi kwe-100 ukuya kwi-150 km.
Iinyikima ezifana nesi siganeko, ezinobunzulu obuphakathi kwe-70 kunye ne-300 km, zidla ngokubizwa ngokuba ziinyikima "zobunzulu obuphakathi". Iinyikima ezinobunzulu obuphakathi zibonisa uguquko phakathi kwamacwecwe athotyiweyo kunokuba kujongano lwepleyiti engekho nzulu phakathi kokuthoba kunye nokungaphezulu kweepleyiti zetectonic. Ngokuqhelekileyo benza umonakalo omncinci kumhlaba ongaphezulu kwefoci yabo kunokuba kunjalo ngeenyikima ezilinganayo zobukhulu obunzulu, kodwa iinyikima ezinkulu ezinzulu eziphakathi zinokuvakala kumgama omkhulu ukusuka kwindawo yazo.
Iinyikima ezinkulu eziphakathi nobunzulu zixhaphake ngokufanelekileyo kweli candelo le-Nazca slab, kunye nezinye iziganeko ezintlanu ezinzulu ezinzulu ze-M 7+ zenzeke kwiikhilomitha ezingama-250 zenyikima ye-28 kaNovemba kwinkulungwane edlulileyo. Inyikima ye-AM 7.5 ngoSeptemba 26th 2005, ebekwe kubunzulu obufanayo kodwa malunga ne-140 km ukuya kumzantsi we-28 kaNovemba, inyikima ye-2021, yabangela ukufa kwe-5, malunga nokulimala kwe-70, kunye nomonakalo omkhulu kummandla ojikelezileyo. Kutshanje, inyikima ye-M8.0 nge-26 kaMeyi ka-2019, malunga neekhilomitha ezingama-230 kumzantsi-mpuma wenyikima ye-28 kaNovemba ka-2021, yakhokelela ekufeni kwabantu aba-2.